အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 6, 2010 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ Matt Chandler
သင်၏အစာအိမ်တွင်နစ်နေသည့်ခံစားမှုသည်သင်၏ browser မှလာလိမ့်မည်။ ယခုကြည့်ရှုရန်မလိုသော်လည်းဂူဂဲလ်မှအသုံးပြုသူများအားခြေရာခံရန်ငြင်းဆန်ရန်ခွင့်ပြုမည့် browser plugin ကိုထုတ်ရန်စီစဉ်နေသည်။ Google Analytics.
ဂူးဂဲလ်သည်ထိပ်တန်းရှာဖွေရေးပံ့ပိုးသူနှင့်ရေပန်းစားသော Google Analytics ဝဘ်အသွားအလာနောက်ကွယ်ရှိစွမ်းအား analytics tool ကို, အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာဖြင့်ခြေရာခံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်.
၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများနှင့် ၀ က်ဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုသောဝက်ဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်အဓိကအားဖြင့် plugin အသုံးပြုမှုသည်ဆိုက်အသွားအလာအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းမှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ Google Analytics သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပထမ ဦး ဆုံးရယူခြင်းမရှိပါက Google အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုရမည်နည်း။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာကနောက်ဆုံးစဉ်းစားနိုင်သည့်အချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဒေတာ။ သင်၏ ISP အချက်အလက်နှင့်ပထဝီဆိုင်ရာတည်နေရာသည်ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသလား။ ဂူဂဲလ် Analytics မှ IP လိပ်စာများကိုမစုဆောင်းပါ။ ဆိုလိုသည်မှာခြေရာခံလိုက်သောအချက်အလက်အားလုံးသည်လုံးဝအမည်ဝှက်ဖြစ်သည်။
ဒီဟာကိုဂူဂဲလ်ရဲ့အမျိုးအစားထဲမှာထည့်ထားသလား စုစုပေါင်းလျှို့ဝှက် သူတို့သည်သုံးစွဲသူများ၏ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်းကိုအကန့်အသတ်မရှိမှတ်တမ်းတင်နိုင်သလော။ ဖြစ်ကောင်း။ ရှာဖွေခြင်းသမိုင်းကဂူဂဲလ်အားထိုအံ့ဖွယ်ကောင်းသောကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပြသရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်၎င်းနှင့်အတူဤအင်္ဂါရပ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် သီးသန့်လုံခြုံရေးစင်တာမှသူတို့ကဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြေငြာဖို့အတိအကျမသွားဘူး။ privacy group သည်ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်သို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည် Google Buzz ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါဒါကြောင့်ဂူးဂဲလ်ဟာ privacy မျက်နှာစာမှာနည်းနည်းလေးပဲနာနေလိမ့်မယ်။
အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ် အခွားနှင့်မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုဒါပေမယ့်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့သည် ဒီတော့ သူတို့မှာဂူးဂဲလ်ပရိုဖိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလူဘယ်နှစ်ယောက်သတိထားမိလဲ၊ ဒီပရိုဖိုင်ကိုသူတို့တည်းဖြတ်နိုင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ privacy settings တွေနဲ့ကြော်ငြာရဲ့ ဦး စားပေးမှုကိုချိန်ညှိနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်ကိုမျှအလျင်အမြန်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ သို့သော် Firefox အတွက် AdBlock Plus ပလပ်အင်ကိုအသုံးပြုသောဝဘ်အသုံးပြုသူစုစုပေါင်း၏ရာခိုင်နှုန်းကဘာလဲ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုစံသွေဖည်ခြင်းပြင်ပတွင်ထားရန်မလွယ်ကူပါ။
ကျနော့်ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူနဲ့စျေးကွက်သမားတွေအတွက်တော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကပိုပိုပြီးစာရင်းပေးသွင်းတာပါပဲ omniture နှင့် WebTrends ကုလားကာနောက်ကွယ်မှငါတို့သူများသည်တတ်နိုင်သမျှဒေတာများများဝင်ရောက်ခွင့်လိုသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီပြောင်းရွှေ့မှုဟာမရှိသေးတဲ့ - ဘယ်တော့မှမတည်ရှိနိုင်တဲ့ပြproblemနာတခုကိုဒူးခေါင်းတည့်တည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။
Tags: analyticsFTCanalytics googleဌက်စုံဘေးဖယ်နေသည်ပရိုဖိုင်းကိုဒီနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကွမ်းခြံကုန်း။
ဧပြီ 6, 2010 မှာ 9: 46 AM
Google Analytics သည် မရေရာသော အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် စျေးကွက်တွင် တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစပ် Adsense နှင့် Analytics ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်သည့် လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပေးသူနှင့် ပေါင်းစည်းခိုင်းသင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုများကြောင့် ကြီးကျယ်သောပေါင်းစပ်မှုများ (ဥပမာ။ Facebook Analytics မှ Webtrends) အချို့ကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ် ဒီကောင်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အမိုက်စားပဲ။
ဧပြီ 6, 2010 မှာ 2: 06 pm တွင်
Webtrends က ဒါက မင်းလုပ်နေတာလို့ ငါထင်တယ် ဒါမှ helluva ဘောနပ်စ်တစ်ခု ရလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်၊ Hanapin မှာရှိတဲ့ Pat East က ဒီအကြောင်းကို မကြာသေးမီက တွစ်တာမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ Wave၊ ထို့နောက် Buzz၊ ထို့နောက် Caffeene ၏ အရန်သိမ်းမှု၊ ယခု ဤအရာ။
အခြားသူများ အမီလိုက်မီအထိ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို ဖျက်စီးခြင်းဖြင့် လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုရယူရန် ကြိုးပမ်းနေပုံရသည်။
ဧပြီ 6, 2010 မှာ 4: 50 pm တွင်
ပိတ်ဆို့ခြင်းကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ လူများကို ခြေရာခံရန် နည်းလမ်းမရှိပါက ၎င်းသည် မကောင်းပါ။ 🙂
ဧပြီ 6, 2010 မှာ 5: 10 pm တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏အမေရိကန်အမြင်တွင် ယင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိသော်လည်း၊ Google Analytics သည် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် (ဤအမျိုးအစားကိုဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရောင်းချသူများကို တောင်းဆိုနေသည့်) Google Analytics သည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤပြောင်းလဲမှုသည် အစိုးရဝဘ်ဆိုက်များအတွက် Google Analytics ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည် (၎င်းသည် US အစိုးရ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာသောကြောင့်)။
ကွဲပြားသောနည်းလမ်းဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှုအဖြစ် စဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ အစိုးရများ၏ စည်းမျဉ်းများသည် ဤဖယ်ထုတ်မှုယန္တရားနှင့် ဆင်တူသောအရာကို မကမ်းလှမ်းဘဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရောင်းချသူများကို ဖမ်းစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဧပြီ 7, 2010 မှာ 2: 10 pm တွင်
စိတ်ဝင်စားစရာအချက်။ ဥရောပဈေးကွက်တွေအကြောင်း မတွေးခဲ့မိဘူး။ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။